China 72MM 200M Yakajeka Acrylic Kuisa Tepi fekitori uye vagadziri | Newera
Bopp Kurongedza Tepi Series
BOPP Kurongedza Tepi
Rakajeka Kurongedza Tepi
Yakadhindwa Kurongedza Tepi
Chakamira Tape Ye Supermarket
Kaviri-mativi Tepi Series
Kaviri Akatenderedzwa Cloth Tepi
Tepi Yakatenderedzwa Tepi
Yakashongedzwa Ruviri Tepi
Flame Retardant Yakatarisana Tepi
Yakakwira-tembiricha-inodzivirira Double Sided Tape
Kwete-yekutsigira Double Sided Tepi
Tepi Yakapetwa Ruviri Tepi
PET Yakapetwa Yakatenderedzwa Tepi
PVC Ruviri Yakatenderedzwa Tepi
Masking Tepi Yakateedzana
Anti-UV Masking Tepi
Rakajeka Masking Tepi
Yakanyanya Kupisa Masking Tepi
Kraft Gummed Tepi
Mvura Yakagadziriswa Tepi
Furo Tepi Series
Acrylic Foam Tepi
EVA Foam Tepi
Pe Foam Tepi
Metal Foil Tepi Yakateedzana
Aluminium Foil Tepi
YeMhangura Tape Tepi
Kuchengetedza Tepi Series
PVC Yemagetsi Insulation Tepi
Yambiro Tape Series
Anti-kutenderera PVC Chengetedzo Tepi
Isiri-inonamira PE Yekuchengetedza Tepi
PVC Chipingamupinyi Tepi
Mufambiro weTape Tape Series
Yakadhindwa Duct Tepi
Isiri-yakasara Dhodhi Tepi
Hapana Yakasara Filament Tepi
Yakadhindwa Filament Tepi
Tambanudza Firimu Series
Kupisa Melt Glue Series
Kupisa Melt Glue Sticks
Jombo Roll Nhevedzano
72MM 200M Yakajeka Acrylic Kuisa Tepi
Yakasimba viscosity; yakasimba tensile simba; yakanaka yekudzivirira mamiriro ekunze; inoshanda kune yakakura tembiricha renji;
Iyo yakaenzana yakavharwa nekumanikidza-inonamira kunamatira emulsion mushure mekudziya, BOPP firimu sechinhu chepasi.
Inonyanya kushandiswa mukutakura kwemakatoni, zvikamu zvekugadzirisa, zvigadzirwa zvakapinza zvakasungwa uye dhizaini dhizaini.
Chinhu Code Kutsigira Namira Ukobvu (mm) Tensile Simba (N / cm) Tack bhora (Nha. #) Kubata simba (h) Kukwidziridzwa (%) 180°peel simba (N / cm)
Bopp Kurongedza Tepi XSD-OPP Bopp Firimu Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 ＞24 140 2
Super Yakajeka Kurongedza Tepi XSD-HIPO Bopp Firimu Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 ＞24 140 2
Ruvara Kurongedza Tepi XSD-CPO Bopp Firimu Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 ＞24 140 2
Yakadhindwa Kurongedza Tepi XSD-PTPO Bopp Firimu Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 7 ＞24 140 2
Mira Tape XSD-WJ Bopp Firimu Acrylic 0.038mm-0.065mm 23-28 6 ＞24 140 2
1928 Scotch tepi, Richard Drew, St. Paul, Minnesota, USA
Achishandisa May 30, 1928 muUnited Kingdom neUnited States, Drew akagadzira namira yakajeka, inobata-bata. Kwayedza yekutanga yakanga isina kunamira zvakakwana, saka Drew akaudzwa kuti: "Dzosera chinhu ichi kuvakuru vako veScotland uye uvabvunze kuti vawedzere glue!" ("Scotland" zvinoreva "inonyima". Asi panguva yeKuderera Kukuru Kwevanhu, vanhu vakawana mazana ekushandisa kwetepi iyi, kubva pakubata zvipfeko kusvika kukuchengetedza mazai.
Nei tepi ichinamira chimwe chinhu? Ehezve, imhaka yechikamu chekunamira pamusoro payo! Yekutanga yekunamatira yakabva kumhuka nemiti. Muzana ramakore regumi nemapfumbamwe, rabha ndiyo yaive chikamu chikuru chekunamatira; nepo mazuva ano, ma polymer akasiyana siyana achishandiswa zvakanyanya. Adhesives anonamatira kuzvinhu, nekuti mamorekuru pachawo nemamorekuru kuti abatanidzwe kuita chisungo, rudzi urwu rwechisungo runogona kubatisisa mamorekuru pamwechete. Iko kuumbwa kwekunamatira, zvinoenderana nemhando dzakasiyana uye dzakasiyana mhando, ine akasiyana mapolymer akasiyana.
Kuisa chisimbiso tepi kunonziwo bopp tepi, kurongedza tepi, nezvimwe. Inoshandisa BOPP biaxially yakanangidzirwa polypropylene firimu sechinhu chepasi, uye zvakaenzana inoshandisa kumanikidza-inonamira yekumatira emulsion mushure mekupisa kuita 8μm - 28μm. Yekunamatira dura chinhu chakakosha muhupenyu hwechiedza maindasitiri emakambani, makambani, uye vanhu vamwe nevamwe. Nyika haina chiyero chakaringana cheiyo tepi indasitiri muChina. Kune imwechete chete indasitiri yakajairwa "QB / T 2422-1998 BOPP yekumanikidza-inonamira tepi inonamira yekuisa chisimbiso" Mushure mekumanikidza kwepamusoro-corona kurapwa kweiyo yekutanga BOPP firimu, yakaoma nzvimbo inoumbwa. Mushure mekuisa iyo glue pairi, iyo jumbo roll inoumbwa kutanga, yobva yadimburwa kuita madiki madiki emhando dzakasiyana nemuchina wekucheka, inova iyo tepi yatinoshandisa mazuva ese. Chinhu chikuru chekumanikidza kunamatira emulsion isylone ester.
Matepi emhando yepamusoro uye epamusoro-soro ane mashandiro akanaka kunyangwe mumamiriro ekunze akaomarara, akakodzera kuchengetera zvinhu mumatura, midziyo yekutakura, kudzivirira kuba kwezvinhu, kuvhura zvisiri pamutemo, nezvimwewo. Kupa anosvika kumatanhatu mavara uye akasiyana akasiyana tepi
Pakarepo inonamira simba: yekunamatira tepi inonamira uye yakasimba.
Kugadzirisa kugona: Kunyangwe paine kumanikidza kushoma, inogona kugadziriswa pane yekushandira zvinoenderana nemifungo yako.
Nyore kubvarura: nyore kubvarura iyo tepi roll isina kutambanudza uye kudhonza iyo tepi.
Yakagadziriswa kusunungura: Tepi yekuisa chisimbiso inogona kudhonzwa kubviswa kubva mupumburu nenzira yakadzorwa, haina kunyanya kusununguka kana kunyanyisa.
Kuchinja-chinja: Iyo tepi yekuisa chisimbiso inogona kuchinjika kune inochinja ichinyatso shanduka chimiro.
Yakatetepa mhando: Iyo yekuisa chisimbiso tepi haizosiyi gobvu kumucheto madipoziti.
Smoothness: Iyo yekuisa chisimbiso tepi inotsvedza kusvika pakubata uye haigumbure ruoko rwako kana uchimanikidzwa neruoko.
Anti-kuchinjisa: hapana chinamirwa chinosara mushure mekuiswa kwekusimbisa tepi.
Solvent kuramba: Iyo yekutsigira zvinhu zvekusimbisa tepi zvinodzivirira solvent kupinda.
Anti-kupatsanurwa: Iyo tepi yekuvhara haina kutsemuka.
Anti-kudzoreredza: Iyo yekuisa chisimbiso tepi inogona kutambanudzwa padivi rakakombama pasi pasina chinoitika chekudzosa.
Kupokana-kukamura: Iyo pendi ichave yakasungwa zvakasungwa kune yekutsigira zvinhu zveiyo yekunamatira tepi.
Inokodzera zvakajairika zvigadzirwa kurongedza, kuiswa chisimbiso uye kubatana, zvipo kurongedza, nezvimwe.
Ruvara: Kudhinda logo kunogamuchirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Transparent yekuisa chisimbiso tepi inokodzera kutakura makatoni, kugadzirisa kwezvikamu, kusunga zvinhu zvakapinza, dhizaini dhizaini, nezvimwe.
Iyo yekuisa chisimbiso tepi inopa akasiyana mavara kuti asangane akasiyana chitarisiko uye aesthetic zvinodiwa;
Iyo yekudhinda yekuisa chisimbiso tepi inogona kushandiswa kune epasi rese kutengeserana chisimbiso, expression logistics, online zvitoro zvivakwa, magetsi emagetsi, shangu dzekupfeka, mwenje mwenje, fanicha uye mamwe anozivikanwa maronda. Iko kushandiswa kwekudhinda yekuisa chisimbiso tepi hakugone chete kuvandudza iyo brand mufananidzo, asi zvakare kuzadzisa iyo Mass Media Kuzivisa Kushambadzira.
Pashure: 48MM 100M Carton Kuisa Tepi
Zvadaro: Inorema Duty Kutakura Kutambanudza Tepi yekufambisa Yekutakura Kutakura, Hofisi & Kuchengetedza
Bvisa Simbiso Tepi
Mucheka Kuisa Tepi
Plastiki Kuisa Tepi
Tape Kuisa Chisimbiso Cloth
Tepi Kuisa Chisimbiso Kraft Pepa 50mmx50mtr
Inorema Duty Kutakura Kutakura Tepi yekufambisa P ...
48MM 100M Carton Kuisa Tepi
SHANGHAI NEWERA VISCID MABHUKU CO., LTD